एक्कासी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कती ? – ramechhapkhabar.com
एक्कासी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कती ?
फागुन २५, काठमाडौं ।
साताको पहिलो र दोस्रो कारोबारको दिन बढेको सुनको मूल्य तेस्रो कारोबारका दिन अर्थात मंगलवार घटेको छ । स्थानिय बजारमा मंगलवार पहेँलो धातु सुनको भाउ रू. ६०० ले ओरालो लागेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ८५ हजार ६०० मा कारोबार भएको छ । सोमवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ८६ हजार २०० मा कारोबार भएको थियो । सोमवारको तुलनामा मंगलवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ६०० ले घटेको हो ।
त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ८५ हजार १५० मा कारोबार भएको छ । सोमवार तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ८५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, मंगलवार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । सोमवार प्रतितोला रू. एक हजार २६५ मा कारोबार भएको चाँदी मंगलवार प्रतितोला रू. एक हजार २५५ मा कारोबार भइरहेको छ । सोमवारको तुलनामा मंगलवार चाँदीको मूल्य रू. १० ले घटेको हो ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको बोनस सेयर डिम्याट खातामा जम्मा
काठमाडौं : मञ्जुश्री फाइनान्सले १८% बोनस सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ । कम्पनीले गत पुस १४ गतेसम्म सेयर डिम्याट गराएकाहरुको बोनस सेयर खातामा पठाइदिएको हो । पुस १४ पछि डिम्याट गर्नेहरुको बोनस सेयर पनि खातामै जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म पनि डिम्याट नगरेकाहरुले खातामा बोनस सेयर पाउनका लागि पहिला आफूसँग भएको भौतिक प्रमाणपत्र डिम्याट गर्नुपर्नेछ । अनिमात्र बोनस जम्मा गरीने कम्पनीले जनाएको छ । मञ्जुश्रीको पुस २९ गते सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १८% बोनस सेयर कर प्रयोजन सहित ५.५% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कम्पनीले यसअघिनै नगद लाभांश सेयरधनीको खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।